पाचन तन्त्रका लागि जरुरी छ प्रोबायोटिक्स:: Naya Nepal
पाचन तन्त्रका लागि जरुरी छ प्रोबायोटिक्स
हाम्रो शरीरको रक्षात्मक प्रणाली एकदम बलियो हुन्छ । पेटमा ५ सयभन्दा बढी राम्रो ब्याक्टेरिया रहेको हुन्छ । यी त्यही ब्याक्टेरिया हुन्, जसले शरीरमा पैदा हुने खराब ब्याक्टेरियाबिरुद्ध लड्ने गर्छ । यिनीहरुको काम हामीले खाएको खानेकुरा पचाउने हो र त्यही कारण हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ ।जब हाम्रो पाचन तन्त्रमा खराब ब्याक्टेरिया बढ्न थाल्छ, तब हामीलाई वान्ता आउला जस्तो महसुष हुन्छ । यसका साथै पेट दुख्ने र पखला लाग्ने पनि हुनसक्छ । खराब ब्याक्टेरिया बढ्नुमा कहिले काहीँ सफाईको कामी वा एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्ट पनि हुनसक्छ । यसले खराब ब्याक्टेरिया सक्रिय हुन्छन् र आन्द्राको बाहिरी पत्र नष्ट गर्न सुरु गर्छन् । त्यही कारण हामीलाई कहिले काहीँ पेटको गंभिर रोग पनि लाग्छ ।यस्तो पृष्टभूमीमा जान्न जरुरी छ कि, प्रोबायोटिक्स कस्तो किसिमको गंभिर रोगबाट लड्न सहयोगी हुन्छ ? यसको स्रोत के हुन् ?
प्रोबायोटिक्सको प्रमुख स्रोत
प्राकृतिक प्रोबायोटिक्सका लागि दही एक राम्रो विकल्प हो । भनिहालौं, दहीमा ल्याक्टोबेसिल्स नाकको ब्याक्टेरिया पाइन्छ । यो ब्याक्टेरिया स्वास्थ्यप्रद हुन्छ । यो शरीरमा पुगेपछि पाचन यन्त्रलाई दुरुस्त बनाउन मद्दत गर्छ । यसका साथै प्रोबायोटिक्सका लागि हामीले पनिर पनि सेवन गर्न सक्छौं । पनिरमा पनि पर्याप्त मात्रामा प्रोबायोटिक्स पाउन सकिन्छ । अझ काँचो पनिर अरु बढी लाभदायक हुन्छ । तारेको वा धेरै पकाएको पनिरमा भने प्रोबायोटिक्स नष्ट हुन्छ । यसैले काँचो पनिर उपयोगी हुन्छ ।प्रोबायोटिक्सको मात्राका लागि सोया दही वा टोफु पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रोबायोटिक्सले कसरी काम गर्छ ?
प्रोबायोटिक्स मूख्य रुपले ब्याक्टेरिया र यीस्टमा पाइन्छ । यसले आन्द्रा र पेटको कार्य क्षमता बढाउँछ साथै त्यसको बाहिरी पत्रको सुरक्षा पनि गर्छ । यसका साथै प्रोबायोटिक्सले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । यसको कम हानिकारक व्याक्टेरिया नष्ट गर्नु र पाचन तन्त्र सम्बन्धित तमाम रोग जस्तो पखला, कोलाइटिस, एन्टि कोलाइटिस इरिटेबल बल सिन्ड्रोम, क्रन्स डिजिज जस्ता रोगबाट बचाउनु हो । त्यती मात्र होइन, यसको काम भजाइनल इन्फेक्सनबाट बचाउनु पनि हो ।
यस कुराको ख्याल राखौं
प्रोबायोटिक्सका लागि प्रत्येक दिन दुई कचौरा दही सेवन गर्न सकिन्छ । यसमा भरपुर मात्रामा प्रोबायोटिक्स पाइन्छ । यद्यपि ताजा दही दुई, तीन भित्र खाइसक्नुपर्नेछ । नभए त्यसमा रहेको राम्रो ब्याक्टेरिया नष्ट हुनसक्छ । बजारमा उपलब्ध दहीको तुलनामा घरमै ताजा दही बनाएर सेवन गर्नु उत्तम हो ।
‘गोर्खा ब्रुअरी गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने कम्पनी हैन’
३ कात्तिक, काठमाडौं । गोर्खा ब्रुअरीले आफ्ना उत्पादनहरुमाथि नियोजित प्रहार भएको बताएको छ । विश्वविख्यात ब्रान्ड काल्सबर्गको नियमित निगरानीमा उत्पादन भइरहेका उत्पादनमाबारे बजारमा चलाइएको हल्ला निराधार र कपोकल्पित रहेको कम्पनीको दावी छ ।कम्पनीले यस्ता भ्रममा नपर्न आफ्ना ग्राहकहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ । कम्पनीको प्रत्येक ब्याचको नमूना लिएर ‘काल्सबर्ग’ले परीक्षण गर्ने गरेको छ । छड्के निगरानीका लागि बजारबाट पनि नमूना संलकन गरेर ‘काल्सबर्ग’ ब्रान्डले तोकेको मापदण्ड पुर्याए/नपुर्याएको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्छ ।यस्तो उत्पादनमा गुणस्तर कमजोर पाइए तुरुन्तै बजारमाट फिर्ता मात्रै गर्नुपर्दैन, ब्रान्ड खोसिनेसम्मको जोखिम हुन्छ । तर, अहिलेसम्म काल्सबर्गले गोर्खा ब्रुअरीको उत्पादनमाथि कुनै प्रश्न उठाएको छैन । बरु काल्सबर्गले गोर्खा ब्रुअरीमाथि भरपर्दो विश्वास देखाएको छ ।कम्पनीका डिपुटी म्यानेजिङ डिरेक्टर सुरेन्द्र सिलवाल गोर्खा ब्रुअरीको उत्पादनको गुणस्तरसँग अहिले बजारमा सुनिएको अन्तःशुल्क विवादको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँछन् ।‘हामीले बजारमा लामो समयदेखि गुणस्तरीय बियरहरु उत्पादन गरेर पठाइरहेका छौं, हाम्रो जोड ग्राहकलाई अझ बढी कसरी सन्तुष्ट गर्ने भन्नेमा हो,’ उनले भने,‘बजारमा गुणस्तरबारे चलाइएका हल्ला कम्पनीको विश्वस्तरीय उत्पादनमथिको प्रहार हो ।’उनका अनुसार कम्पनीलाई कमजोर गुणस्तरको बियर उत्पादन गर्न विश्वस्तरीय ब्रान्ड काल्सबर्गले नै छुट दिँदैन । त्यसमाथि गोर्खा ब्रुअरी आफैं पनि त्यस्ता अनुचित काममा नलाग्ने भन्दै सिलवालले कम्पनीको उत्पादनमाथि पूर्ण विश्वास र माया गरिराख्न ग्राहकलाई आग्रह गरे ।‘हामी अरु कुरामा सम्झैता गर्न सकौंला, तर गुणस्तर, ग्राहकको स्वाद र सन्तुष्टिको मामिलामा एकरत्ति पनि सम्झौता गर्न तयार छैनौं,’ सिलवालले भने,‘गोर्खा ब्रुअरी आजको स्थानसम्म यही प्रतिवद्धताका कारण आइपुगेको हो, यसमा कसैले शंका गर्नुपर्ने छैन ।’
आफ्ना उत्पादनको सरकारले पनि अनुगमन गर्ने गरेको भन्दै उनले सरकाकारे गुणस्तर अनुगन र नियमन गर्ने निकायबाट अहिलेसम्म प्रश्न नउठेको प्रष्ट पारे । अन्तःशुल्कको विषयलाई उत्पादनको गुणस्तरसँग जोड्नु अन्यायपूर्ण हुने भन्दै उनले यसबाट कपनी कति पनि बिचलित नहुने बताए ।‘हामी हाम्रा ग्राहकलाई असन्तुष्टि पैदा हुने गरी कुनै काम गर्दैनौं,’ उनले भने,‘नियमित काल्सबर्ग सेवन गर्नेहरुले यसलाई मज्जाले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ ।’काल्सबर्ग कम्पनीले जे रेसेपी दिन्छ, त्यहीअनुसार बियर बनाउँदै आएको भन्दै सिलवाल भन्छन्,‘हामीले गुणस्तर घटाउन चाह्यौं भने पनि त्यो अनुमति प्राप्त हुँदैन, हामी पनि ग्राहकको विश्वास टुटाउने गरी कुनै गतिविधि गर्ने पक्षमा छैनौं’ सक्दैनौं,’ उनले भने ।काल्सबर्गले आफ्नो विश्वास गुम्न नदिन उत्पादनमा कडा मापदण्डहरु अपनाउन गोर्खा ब्रुअरीलाई नियमित निगरानीमा राखेको हुन्छ । कम्पनीमा नै काल्सबर्गकै प्रतिनिधि खटिएका छन् ।अन्तःशुल्कका विवादका विषयमा नियामकसँग छलफल भइरहेको भन्दै सिलवालले अन्य विषयमा जोडेर ब्रान्डकै बदनाम गराउँदा भविष्यमा नेपालमै विदेशी प्रविधि र लगानी आकर्षित गर्न असहज हुने बताए ।‘यो विदेशी प्रविधिमार्फत स्वदेशी ग्राहकलाई सन्तुष्ट गर्न उत्पादन गरिएको बियर हो,’ उनले भने,‘गोर्खा ब्रुअरीले विश्वस्तरीय उत्पादन नेपालीहरुमाझ पस्किन सकेको कारण पनि हामीप्रति काल्सबर्ग ब्रान्ड र यसका ग्राहकले देखाउनुभएको आभूतपूर्व माया नै हो ।’